Taariikh Nololeedka Marxuum Xildhibaam Xuseen Bantu | Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 6 April 2015 7 April 2015
Wasiirkii hore ee Xanaanada Xoolaha iyo Kaluumeysiga ee Soomaaliya Xildhibaan Xuseen Maxamuud Muuse (Xuseen Bantu) oo Muqdisho ku geeriyooday.
Allah u naxariistee Marxuum Xildhibaan Xuseen Maxamuud Muuse (Xuseen Bantu), Wasiirkii hore ee Xanaanada Xoolaha, Kaluumeysiga iyo Degaanka ayaa shaley taariikhdu markey ahayd 05/04/2015 ku geeriyooday magaalada Muqdisho oo uu ku xanuunsanayey beryahan dambe.
Marxuumka, ayaa 1950kii ku dhashey degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, isagoo waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare ku soo kala qaatey Jamaame, Kismaayo iyo Muqdisho.
Waxaa uu kadib ka qalinjebiyey Jaamacaddii Umadda Soomaaliyeed, isagoo kadibna noqdey macallin.
Markii ay dalka ka dhaceen dagaaladii sokeeye 1991kii,marxuumka waxaa uu ka mid noqdey aasaaseyaashii Ururkii u taagnaa xuquuqda qowmiyadda Bantu-ga Soomaaliye ee loo yaqaaney Somali African Muki Organization (SAMO). Waxaa uu si dhow u la shaqeeyay madaxdii ururkaasi oo uu ugu horreeyo guddoomiyihii ugu horeeyay ee SAMO Marxuum Maxamed Ramadaan Arbow iyo siyaasiga Mowliid Macaane Maxamuud.
Marxuum Xuseen Bantu oo lagu yaqaaney codkarnimo, iyo nin aan ka gamban raadinta xuquuqda dadka dulman ee beelaha Bantu-ga, waxaa uu la taliye sare ka ahaa ururka SAMO ilaa sannadkii 2001, markaas oo uu si rasmi ah ula wareegay xilka Guddoomiyenimada Ururka SAMO oo Muqdisho loogu doortey, markii u geeriyooday Allah u naxariistee Marxuum Maxamed Ramadaan Arbow.
Waxaa marxuumka uu door hormuud ah ka qaatey shirarkii dib u heshiisiinta Soomaaliya, isagoo si gaar ah uga soo dhex muuqdey shirkii Carta, shirar ku saabsan cilmibaarista Soomaaliya iyo dadaalo kale oo dhinaca nabadda la xiriira.
Marxuum Xuseen Maxamuud Muuse, waxaa kale oo uu ka dhex muuqdey shirkii dib u heshiisinta kooxaha Soomaalida ee lagu qabtey dalka Kenya intii u dhexeysey 2002 ilaa 2004, isagoo markaasii noqdey Xildhibaan.
Waxaa isla sannadkii 2004 uu ka mid noqdey xubnihii golaha wasiirrada , isagoo noqdey waiir ku xigeenka waxbarashada, muddo yar kadibna waxaa loo magacaabey, wasiir ku xigeenka iskaashatooyinka Soomaaliya. Bishii October, sannadkii 2008, marxuumka waxaa uu noqdey Wasiirka Xanaanada Xoolaha, Kaluumeysiga iyo Bay’adda.
Doorashadii sannadkii 2012-ka ayaa Mudane Xuseen Bantu waxaa uu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo baarlamankii ugu horeeyay ee rasmi ah ee ay Soomaaliya yeelato tan iyo burburkii ka dhashey dagaaladii sokeeye. Waxaa uu marxuumka xildhibaan ahaa muddo 11 sanno oo xiriir ah ilaa laga soo gaaro shaley 05/04/2015 oo uu ku geeriyooday gurigiisa.
Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Sharma’arke ayaa tacsi u direy qoyska, eheladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Marxuu, Xuseen Maxamuud Muuse (Xuseen Bantu).
“Allah u naxariistee Marxuum Xuseen Bantu, waxaa uu u soo shaqeeyay qaranka Soomaaliyeed, xilliyo duruuftoodu kala duwan tahay, waxaana uu ahaa nin si weyn u rumeysan Soomaaliya oo nabad ah oo hormartey, dadkeeduna ku nool yihiin midnimo, caddaalad iyo barwaaqo. Waxaa uu ahaa geesi aan aragtidiisa la gamban oo dood yaqaan ah marka lagu jiro baarlamanka, iyo xilliyada kale ee laga hadlayo arrimaha Soomaaliya”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Sharma’arke.
Marxuumka waxaa uu ifka kaga tegey 21 ruux oo isugu jira wixii uu dhaley iyo waxa ay sii dhaleen. Waxaana Ilaahay uga baryeynaa naxariistii inuu jannada ka waraabiyo, qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyoodayna uu samir iyo iimaan ka siiyo.
Tagged xuseen bantuu